Isigodi sase-Eastern Cape sizilela ukwedlula emhlabeni kwendoda ekhule kakhulu ngeminyaka umhlaba wonke. | Scrolla Izindaba
Isigodi sase-Eastern Cape sizilela ukwedlula emhlabeni kwendoda ekhule kakhulu ngeminyaka umhlaba wonke.
Isigodi sase-Aldelaine, e-Eastern Cape, sizilela ukwedlula emhlabeni komhlali waso omdala kunabo bonke – uFredie Blom obeneminyaka eyi-116.
Abezindaba i-International news ibika ukuthi akuqinisekisiwe ngokusemthethweni ukuthi uBlom nguye indoda endala emhlabeni wonke ngokweminyaka.
I-AFP ibika ukuthi uBlom walahlekelwa ngumndeni wakhe wonke ngenxa ye-Spanish flu, kanye nabantu baseNingizimu Afrika abangaphezulu kwabayi-500,000 nezigidi eziyi-50 zabantu umhlaba wonke. Ubengajwayele ukugula futhi ubehlezi esebenza.
Kodwa uphilile kulolu bhubhane lwe-Covid-19, uzewashona nje ngokufa okubangelwa yimvelo.
Okhulumela umndeni uAndre Naidoo uthe:
“Emavikini amabili edlule uOupa(umkhulu) ubesagawula izinkuni.
“Ubeyindoda enamandla kakhulu, eziqhenya futhi.”
Uzalwe mhla ziyisishiyagalombili kowezi-1904, uBlom ushonele esibhedlela sase-Tygerberg eKapa.
Lona ophile iminyaka eyikhulu ubephila nonkosikazi wakhe uJeanette oneminyaka engama-86 ubudala.
Ivideo (ku-Twitter [email protected]) ingeyokubungaza usuku lokuzalwa likaBlom lweminyaka eyi-114.